Thwebula Ready For Pushback Boeing 747-200v2 FS2004 - Rikoooo
Usayizi 71.1 MB
Play 36 160
Umbhali: Vmax Flight Systems, Inc. kaRalph Panel Shop and Ralph L. Tofflemire
Lena inguqulo egcwele Ready for Pushback "Okwesibili Generation".
Le nguqulo ye Ready for Pushback kuhlanganisa update ekhishwe ngo-June, 2004. Qiniseka ukufunda amafayela 2 doc wanezela ideskithophu yakho njengoba inikeza ukwaziswa okuwusizo.
Ready for Pushback Version V2 iyona freeware eziphambili kakhulu Classic B747 Simulator etholakalayo namuhla for Microsoft Flight Simulator 2004.
Ngaphandle umbuzo kuyodingeka ukuthi utadishe kabusha isifundo le imibhalo ngokucophelela ngaphambi uzokwazi ukusebenzisa le sekulingisa.
Ukuba ngokoqobo kakhulu kwabaningi. Fuel, Electric, Hydraulics futhi Pnuematics bayingxenye eziyinkimbinkimbi yalesi sekulingisa futhi kuzodinga ukuthi basuke isetshenziswe ngendlela efanele.
Le nguqulo thwebula kuhlanganisa panel ezimbili kanye 17 izindiza.
Analog izinjini Izikali nge analog ichopho izinkomba
Tape injini Izikali
Air Canada - livery entsha
Air Canada - livery ubudala
Iberia - livery Old
Air Korean - livery Old
Qantas - livery Old
Lufthansa - livery New
Lufthansa - livery Old
Virgin Atlantic - livery Old